Abahleli - I-Word Foundation • kwi-Word Word Magazine
Abahleli be-Word Word Magazine
Ezi zihleli ngoHarold W. Percival zimela iqoqo epheleleyo epapashwe kuyo Ilizwi umagazini phakathi kwe1904 kunye ne1917. Phantse kwiminyaka elikhulu leminyaka ubudala, iimagazini zanyanga zonke zincwadana. Iinqununu ezingamashumi amabini anesihlanu ezibophelelweyo Ilizwi ziphela kuphela zabathengi kunye namathala eencwadi kwihlabathi jikelele.
Ngethuba lokuqala likaMnu Percival, UkuCinga nokuPhelela, yapapashwa kwi-1946, wayephuhlise isigama esitsha esiya kumenza akwazi ukuhambisa iziphumo zokucinga kwakhe. Oku ubukhulu becala ichaza umahluko phakathi kwemisebenzi yakhe yangaphambili neyasemva kwexesha. Iitayiphu zohlobo oluthile zinokwenzeka ngenxa yemihla ebekiweyo ebekiweyo yenyanga kunye nemfuneko yokufotokopa unobumba ngamnye ngesandla. Ngomdla wokugcina ubunyani bala maxwebhu, ukulungiselela izizukulwane ezikhoyo nangoku ezizayo, ziphinda zenziwe apha ezingafakwanga. Oku kuthetha ukuba iimpazamo zochwethezo kunye nokusetyenziswa kweziphumlisi ezithandwayo ngelo xesha zigcinwe.
Ukuba untsha kumbhalo kaMnu Percival ungathanda ukuba uqale uqhelane ne-magnum opus yakhe, UkuCinga nokuPhelela.
Cofa kwi PDF apha ngezantsi ukuze uphindwe kwifomathi yentsusa.
Cofa kwi HTML ukukhangela ngokulula.
Ukuhlelwa okudala, cofa apha Contents kwitafile yomxholo.
Olunye uhlengahlengiso lungabhekisa kolunye uhlengahlengiso (oluchongiwe nguVol kunye no.). Ezo zinokufunyanwa Apha.
Iimpendulo zoMasters kunye neMahatmas PDF HTML Contents
Ukuzalwa Kwabafileyo Ukufa PDF HTML
umphefumlo PDF HTML
Mzalwana PDF HTML
UKristu PDF HTML
Ukukhanya kweKrisimesi PDF HTML
Ubulumko PDF HTML
Ubulumko NgoLwazi PDF HTML Contents
Imiqulu PDF HTML
umnqweno PDF HTML
Ukungaqiniseki PDF HTML
Ukuhamba PDF HTML
ukutya PDF HTML
imo PDF HTML
Ubuhlobo PDF HTML
izulu PDF HTML
Isihogo PDF HTML
Ithemba kunye noyiko PDF HTML
Mna kwiiSenses PDF HTML
I ngcamango PDF HTML
Ubuntu PDF HTML
Ukuxiliswa PDF HTML Contents
ubomi PDF HTML
Ukuphila - Ukuphila Phakade PDF HTML Contents
Izibilini PDF HTML
Umyalezo Wethu PDF HTML
isimo PDF HTML
I-Psychic Tendencies kunye noPhuhliso PDF HTML
Ngesondo PDF HTML
ukulala PDF HTML
Into PDF HTML
Ucinga PDF HTML
Iveyili yeIsis, The PDF HTML
Ngaba PDF HTML
Nqwenela PDF HTML